Dfs oo codsatey in Walaalahooda Itoobiya Ciidamo u soo diraan Soomaaliya – MANABOLYO NEWS
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku hubeysan gawaarida dagaalka ah iyo baabuuro kale oo ay wataan ciidamada Itoobiyaanka ayaa saaka markii 2aad 24 saac gudahood ka soo gudbay Doolow Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa la sheegay in ay aadeen dhanka iyo degmada Luuq halkaasi oo ay isku aruursanayaan ciidamada DFS iyo Askartii lagu qabtey dagaalkii bisha horaantiisa ka dhacey Gobolka Gedo una dhaxeeyey Ciidamada Jubbaland iyo kuwa DFS,
Wararka qaar ayaa sheegaya in ay saldhigyo ka dhiban-doonaan Bay iyo Shabeellada hoose halka warar kale ay sheegaan in ay u socdaan Baardheere, Gobolka gedo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa saaxiib la ah R/Wasaaraha Ethiopia Abbyi Ahmed, isagoo ka dalbadey ciidamo dhoor jeer hore balse u suurta gali weyday ayaa maanta qeybtii kowaad ee ciidamada Farmaajo codsadey ee Itoobiyaanka soo gaareeyn Gobolka Bay, magaala madaxdiisa Baydhabo.
Tan ayaa kusoo aadeeyso xili ay Madasha Musharaxiinta. mar kale ku dhawaaqeeyn in ay qaban doonaa anaanbax kii hore ka weyn iyadoo ay Dowlada waqtigeedii dhamaadey ku adkeysaneeyso in uusan dhicin Mudaaharadaadkaasi
Waxaa isa soo taraya hadalada kul kulul ee beesha caalamka ku dhawaaqayaan ayagoo marnaba ogolaaneeynin in shacabka la caburiyo, waxeyna marar badan u sheegeyn in DFS oo waqtigeeda dhamaado joojiso dagaalka ay ku qaadeeyso mucaaradka islamarkaasna ugu baaqeeyn in miiska wadhadalka la fadhiistaan Mucaaradka iyo Madaxda Dowlad goboleedyada.
Mudaaharaadka Jimcaha oo kusoo biireeyn Madax cusub
Beesha caalamka oo ogaatey in Farmaajo uu caqibad ku yahay Dimuqraadiyada
Ra’iisul Wasaare Rooble & Musharaxiinta oo shir uga socda Hotel Decale
Gudiga DFS & kuwam Maamul Goboleedyada oo lagu dhawaaqey
Dowladii dhacdey oo dooneeyso Bandoow siyaasadeesan in Muqdisho kusoo rogto & Mucaaradka oo ka digey